Maninona ny Mpanompon'Andriamanitra Luisa Piccarreta? - Countdown ho an'ny Fanjakana
Ireo izay mbola tsy naheno fanolorana mety ho an'ny fanambarana momba ny "Fanomezana fiainana amin'ny sitrapon'Andriamanitra," izay natolotr'i Jesosy an'i Luisa indraindray dia very hevitra ny zotom-pon'ireo izay nanana an'io fampidirana io: "Nahoana no manantitrantitra tokoa ny hafatr'ity vehivavy miraviravy mahantra ity avy any Italia izay maty ny 70 taona lasa izay?"
Na dia afaka mahita fampidirana toy izany aza ao amin'ny boky ianao. Ny Crown of History, Ny satrobonin'ny fahamasinana, Ny herin'ny sitrapoko (navoakan'ny Vatican mihitsy), Torolàlana ho an'ny Bokin'ny Lanitra (izay miteraka tsy voatsara), ny asan'ny Fr. Joseph Iannuzzi, ary loharanom-baovao hafa, azafady avelao aho hiaina eto, amin'ny fehezanteny vitsivitsy monja, dia miezaka ny hamongotra ny tsy fahatomombanana.
Tahaka ny fanambarana mahatalanjona ny Famindrampon'Andriamanitra izay nankinin'i Jesosy tany amin'i St. Faustina Ny famonjena farany ataon'Andriamanitra (talohan'ny Fiavany Fanindroany amin'ny fahasoavana), toy izany koa ny fanambarany momba ny toetran'Andriamanitra dia natolotry ny Mpanompon'Andriamanitra Luisa Piccarreta Ny ezaka farany ataon'Andriamanitra amin'ny fahamasinana. Ny famonjena sy ny fanamasinana: ireo finiavana roa lehibe ananan'Andriamanitra ny zanany malalany. Ny taloha dia ny fototry ny farany; araka izany, mety ny efa niely voalohany ny fanambarana nataon’i Faustina; kanefa, amin'ny farany, Andriamanitra dia tsy te-hanaiky ny famindram-pony fotsiny, fa hanaiky ny fiainany manokana ho toy ny fiainantsika ary noho izany dia lasa mitovy aminy - araka izay azo atao amin'ny zavaboary iray. Raha ny fanambarana nataon’i Faustina, ny tenany, dia mifanandrify tsy tapaka amin’ity fahamasinana vaovao hiaina ao amin’ny Sitrapon’Andriamanitra ity (toy ny fanambarana nataon’ireo maro hafa tena nanaiky tamim-pankatoavana ny 20thtaonjato), navela ho an'i Luisa ho mpitati-baovao voalohany sy "sekretera" amin'ity "fahamasinana vaovao sy masina" ity (araka ny niantsoan'ny Papa Masindahy Joany Paoly II azy).
Na dia ortodoksa feno aza ny fanambaran'i Luisa (naverin'ny Fiangonana matetika izany ary efa nankatoavina tokoa aza izy ireo), na izany aza, dia omen'izy ireo ny marina, ilay hafatra faran'izay mahavariana indrindra. Ny hafatr'izy ireo dia mampisaintsaina tanteraka fa ny fisalasalana dia fakam-panahy tsy azo ihodivirana ary ny fialamboly azy te Antsoina, fa noho ny antony tsy misy antony marim-pototra ihany no miahiahy amin'ny maha-azo itokiana azy. Ary ny hafatra dia izao: aorian'ny fanomanana 4,000 taona ao anatin'ny tantaran'ny famonjena sy ny 2,000 taona amin'ny fanomanana mipoaka kokoa amin'ny tantaran'ny Fiangonana, dia vonona handray ny satroboninahiny ny Fiangonana; vonona handray an'izay nomen'ny Fanahy Masina azy izy amin'ny fotoana rehetra. Tsy misy hafa noho ny fahamasinan'i Edena mihitsy, izany hoe ny fahamasinana ananan'i Maria koa, tamin'ny fomba tonga lafatra kokoa noho i Adama sy i Eva -ary efa azo alaina izany ankehitriny ho an'ny fangatahana. Ity fahamasinana ity dia antsoina hoe "Miaina amin'ny Sitrapon'Andriamanitra." Fa fahasoavan'ny fahasoavana. Fahafantarana tanteraka ny vavaka "Rainay" ao amin'ny fanahy fa ny sitrapon'Andriamanitra dia hatao ao aminao tahaka ny nanaovan'ny olo-masina any an-danitra azy. Tsy fanoloana ny fotoam-bavaka sy fanao efa nangatahan'ny lanitra antsika izany - mampiditra ny Sakramenta, mivavaka amin'ny Rosary, mifady hanina, mamaky soratra masina, manokan-tena ho an'i Maria, manao asa famindram-po, sns. miantso mavitrika kokoa sy misandratra kokoa aza, satria afaka manao izany rehetra izany amin'ny fomba tena voafaritra tsara isika.
Ireo no teny nangataka an'i Jesosy mba tsy ho ao an-tsaintsika, sy ny fontsika ary ny vavantsika. (Jereo ny Momba an'i Luisa sy ireo soratany raha fintina fohy momba ny mysticisme miavaka an'i Luisa sy ny toeran'ny mpitondra fivavahana ankehitriny.
Hafatra avy amin'ny Mpanompon'Andriamanitra Luisa Piccarreta
Luisa - Hikomy amin'ireo mpitarika aho
Ireo vitsy sisa tavela dia ho ampy hanavao izao tontolo izao.
Luisa Piccarreta - Andao hijery lavitra
Mahita ny fanamboarana ny fanjakako, avy amin'ny alahelo lalina mankany amin'ny fifaliana lehibe aho ...
Luisa Piccarreta - olona izay mitoetra ao amin'ny sitrapoko
Te-hahafantatra ve ianao hoe rahoviana ny tena fitsanganana amin'ny fanahy?
Ny fahamasinana vaovao sy masina
Ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany, ho fanatanterahana ny tena vavaka ataon'ny Raintsika manokana, dia tsy ny hanao ny tontolo ho toerana tsara tarehy sy mahafinaritra indrindra - na dia azo antoka fa hitranga izany fiovana izany. Ny momba ny fahamasinana no tanjona indrindra.
Luisa Piccarreta - Manafaingana ny fihavian'ny fanjakana
Nananatra an'i Luisa sy antsika rehetra i Jesosy hoe: "Koa mivavaha ary avelao hitohy ny fitomanianao:" Enga anie ny Fanjakan'ny Fiatanao, ary hatao ny tanyo, tahaka ny any an-danitra. "
Luisa Piccarreta - Tsy misy tahotra
Nasehon'i Jesosy tamin'i Luisa io fahitana io momba ny fiarovana amin'ny Chastisements mihetsiketsika: "Nandehandeha tany afovoan'ny zavamananaina nanerana ny firenena rehetra i [Our Lady] ary nanamarika ireo zanany malalany sy ireo izay tsy tokony ho voakasiky ny fampijaliana izy. Nentanina ny Reny selestialy, tsy nisy hery hikasika ireo zavaboary ireo ny fikapohana. Nomen'i Jesosy an'i Neny ny zo hitondra any amin'ny reniny izay tiany. "
Luisa Piccarreta - Era an'ny fitiavana masina
Momba io Era io fa tsy ho ela raha hiposaka izao tontolo izao dia nanambara tamin'i Luisa i Jesosy: "Hovana ny zava-drehetra ... Haneho fampisehoana lehibe kokoa ny sitrapoko, amin'ny famolavolana zava-kanto vaovao mahafinaritra ny fahagagana izay mbola tsy hita, ho an'ny rehetra manontolo. Dia ny lanitra sy ny tany rehetra. "
Luisa Picarretta - Amin'ny famaizana
Hoy i Jesosy: Anaka, izay rehetra hitanao [Chastisements] dia hanompo hanadio sy hanomana ny fianakavian'olombelona. Ny korontana ...
← Maninona ireo mpahita fahitan'ny…
Fa maninona no Gisella Cardia? →